» DHAGAYSO: Wasiirka Gaashaandhiga oo Waraysi gaar ah ku sharaxay socdaalkiisa Baydhabo iyo Tuhuno ku aadan…
DHAGAYSO: Wasiirka Gaashaandhiga oo Waraysi gaar ah ku sharaxay socdaalkiisa Baydhabo iyo Tuhuno ku aadan…
January 3, 2013 - Written by maamule - Edited bymaamule ShareWaxaa Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ku hoyday Wasiirka Gaashaandhiga xukumada Soomaaliya oo ay wehliyaan saraakiil katirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Socdaalkiisa ayaa waxaa lagu sababayeeyay inuu mushaaraad siinayo ciidamada dowlada ee kusugan magaalada iyo guud ahaan gobollada Bay iyo Bakool.
Waxaase jira warar kale oo sheegaya in Wasiirka uu Baydhabo utagay ciidamo ukala qeysamay qaab jufo ahaan ah oo kuwada sugan magaalada baydhabo.
Ciidamadaas ayaa la sheegay in ay kala taabacsan yihiin Shariif Xasan Sh Aadan, Maamulka gobolka Bay iyo Sh Aadan Madoobe kuwaas oo isku diidan maamul goboleed la doonayo in halkaas laga sameeyo.
Hadaba Wasiirka Gaashaandhiga ayaa sharaxaya waxa uu Kismaayo kula kulmay iyo hadii ay jiraan dhacdooyinkaas la xariira Khilaafka.
Riix Halkan si aad Waraysiga Wasiirka udhagaysato
4 Responses to DHAGAYSO: Wasiirka Gaashaandhiga oo Waraysi gaar ah ku sharaxay socdaalkiisa Baydhabo iyo Tuhuno ku aadan…
Habasweyne secondary boys says:	January 3, 2013 at 07:55	Nacalaa idinka iyo jasiyadina ku taala haday beydhabo kahadlayan kismaayo ayey ku darayan haday muqdisho kahadlayan kismaayey ku darayan bal warbixintan ufiirso meeshii laga rabay inay ku qoran beydhabo waxay ku qoreen kismaayo marka afkiina xadyaa ama daayaba kismaayo sheekadeeda way dhamatay ee dadkii iska lahaa ayaa mesha kusii qulqulayaa oo buux dhafiyey tusaale anigu waxan ku dhashay waxna aan ka bartay mesha aan rabo inaan dago waa kismaayo bunbuuniyow warka kismaayo laangab ay ku ciilin by
Reply	Jubalander wiseman says:	January 3, 2013 at 11:30	Aankusaxee baydhabo ayaad kahadlaysay ee waamaxay kismaayada aadlabooday . Waxaa layiri wixi uurkajiro afkaaxado. Walee kismaayo waxbakamatartaan waan uunkusii midoobaynaa kuna liibaanaynaa
Reply	Advisor says:	January 3, 2013 at 14:42	Kkkkkkkkk! Jubaland State + OgadenRegion State of Ethiopia????
Reply	Run sheeg says:	January 3, 2013 at 15:42	Ninkaa gaan Doqonka ah ee Habasweyne wato Jaahilbaad tahay waxaan u daliil Caayda marwalbo afkaada ka baxeyso iyo Khabyaalada kugu cusub oo aad u sacab tumeyso ,Laakiin waxaa ku yaqaan Kenyaanka Kaa kufsaday Gabdhihii kula dhashay iyo Tigreydii kufsan jirtay ragaada Gumeysi kunool oo aan indho wax arko laheen oo keliya dhuun wax dhuniso leh baad tahay. Wuxuu waa khoraal magaalo Hadii magaalo lagu khaldo inaad dad u aflagadeyso ma ahan Doqon yahoow. weligii somali baa u dagaalami jirtay in lagu xureeyo adna Gumeysiga ayaad happy ku aheed ilaa iyo hadana waxaad dadbada ku wadata Xabashi iyo kukuuyo. Dabkaa ba’a Doqon yahoow .